IBurundi | KONGOLISOLO
EBurundi: Uhulumeni waseBurundi usanda kumemezela, ngoLwesibili ngoJuni 9 esitatimendeni sabezindaba, "Ukufa okungalindelekile" kukaMongameli uPierre Nkurunziza, olaliswe esibhedlela kusukela ngoMgqibelo ngemuva kokugula
Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: Juni 9, 2020 13: 07 Awekho amazwana
UPierre Nkurunziza, obambe izintambo kusukela ngonyaka ka-2005, ushonile ngoMsombuluko kulandela "ukuboshwa kwenhliziyo", umemezele abaphathi, abamemezele isililo sezwe izinsuku eziyisikhombisa. L ...	Funda kabanzi
UHapi, wezwa umfula iNayile ingumfula omude kakhulu ungcwele ngesimo sabo sokuthuthuka komnotho, ezenhlalo nakwezamasiko "Yadlala futhi yadlala indima ebaluleke kakhulu eGibhithe lasendulo"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 5, 2020 03: 03 Awekho amazwana
Izikhukhula zaminyaka yonke zalo mfula zagcwalisa isigodi saseNayile, okwenza sikwazi ukuchuma kwezolimo emazweni angaphezu kwe-10 ase-Afrika. Lo mfula ocwebile nangobungcwele ...	Funda kabanzi
IBurundi ayilandelanga noma yiziphi izindlela zokuvimbela ukunyakaza maqondana nomqedazwe we-coronavirus! Incwadi engabhalisiwe evela kuMnyango Wezangaphandle ithe ...	Funda kabanzi
EBurundi: UMkhandlu Kazwelonke Wezokuxhumana unqume ukumisa izinyanga eziyisithupha ukusakazwa kweBBC neLa Voix de Amérique, imisakazo emibili yamazwe omhlaba esakaza izinhlelo ngolimi lwendawo
Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: May 5, 2018 22: 03 Awekho amazwana
EBurundi, ngenkathi umkhankaso wereferendamu wethulwa ngokusemthethweni ngaphandle kokuba umbhalo waziwe, isikhala semithombo yezindaba sincipha kakhulu. Ezweni lapho okuningi ...	Funda kabanzi
IBurundi iguqa amantombazane amancane ukwamukela iNkosana yaseBelgium ngesikhathi sokugubha iminyaka engu-50 yokuzibusa e-2012
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Okthoba 12, 2017 00: 01 Awekho amazwana
Ingabe yindlela yokubonga abaseBurundi ngokuhlukanisa abantu baseRwanda baseRwanda ngokudala imibono yamaHutu namaTutsi eyabangela izinhlekelele esizazi? Kuphi ...	Funda kabanzi
Aug06 12: 36